Nhau - Folding tafura mukana hunhu
Yekupeta tafura mukana hunhu
1. Tsoka diki
Sezvo zvinoreva zita, tafura yekupeta tafura inogona kupetwa. Ichi ndicho chinonyanya kukosha chekugadzira patafura yekupeta. Kana nzvimbo iri mumba mako yakaganhurirwa, handiti? Tafura dzekupeta dzinobatsira iwe, dzivhure paunenge uchidzida, dzipete pausingade, wozviisa parutivi, uchichengetedza nzvimbo yakawanda.
Muchokwadi, iyo mutengo wekupeta tafura kazhinji haina kudhura zvakanyanya, saka ipfuma kwazvo kupeta fenicha, kuunza nyore kuhupenyu hwedu kuunza nekukurumidza panguva imwe chete, asi zvakare chengetedza mari yedu.
Iwe unogona kugadzirisa Angle zvakasununguka
Imwe, furidza kuumba michini mutengo wakaderera, kunyanya furidza kuumbwa muforoma
Kana uchigadzira zvigadzirwa zvakafanana, mutengo wekurova michina ndeye 1/3 ~ 1/2 yeiyo michina yejekiseni, mutengo wekugadzirwa kwezvigadzirwa wakadererawo.
Chechipiri, ine kuita kwakanaka
Mukuvhuvhuta kuumbwa, billet inoumbwa nemusoro wemuchina pasi pekumanikidza kwakaderera uye pakudzvinyirira kwakadzika, mazhinji acho ari 0.2-1.0Mn.Downblown, kuitira kuti kusagadzikana kwechigadzirwa kuve kudiki, kusimba, kukanganisa, kukombama uye kusagadzikana kwezvakatipoteredza kuita Yakakwira, saka, ine kuita kuri nani. Mujekiseni jekiseni, iyo inonyungudika inopfuura nepakuumba mumhanyi uye gedhi pakudzvinyirirwa kukuru (15-140yPA), izvo zvinotungamira mukusaenzana kugoverwa kwekushushikana.
Semuenzaniso, zvigaro zvekuvhuvhuta, zvigaro zvekuvhuvhuta zvine mwero zvinofananidzwa nezvigaro zveFRP uye zvimwe zvakaomarara zvigaro zvejekiseni repurasitiki. 1. Inonyaradza, yakapetwa kaviri mhango, izere nekusimba, chigaro chakasununguka; 2.2, kukanganisa kuramba, kupisa kupisa, yakanaka mvura kuramba, kwete nekuda kwezuva, mvura, chando kukanganisa kunokonzerwa nekutsemuka nekukuvara. 3, kuramba kumakemikari akawandisa, yakanaka mafuta kuramba, kana paine mafuta tangi, makwapa, nyore kushambidza .
Iyo ine yakanyanya kukanganisa kuomarara uye anti-kutsemuka chivakwa
Iyo yakakwira diki vinyl (PE) zvinhu zvine yakanyanya kukwirisa hama mamorekuru uremu pane jekiseni-giredhi mapurasitiki Saka Naizvozvo, furidza kuumbwa zvigadzirwa zvine kwakanyanya kukanganisa kuomarara uye kukwirira kurwisa kwezvakatipoteredza kunetseka kutsemuka kuita, inokodzera kugadzirwa kwekupakata kana sipo sipo uye kemikari. midziyo reagent kana emabharaki.
Chechina, zviri nyore kuburitsa rakasiyana rusvingo ukobvu weiyo imwechete yekurova zvigadzirwa
Sezvo furoma muforoma inongogadzirwa chete neyakaipa muforoma, iyo rusvingo ukobvu hwechigadzirwa chinogona kuchinjwa nekungogadzirisa yekufa gwanza kana extrusion mamiriro emuchina musoro, izvo zvinobatsira kwazvo kune icho chigadzirwa chisingakwanise kuverenga zvakaringana madziro ukobvu Mari yekushandura ukobvu hwechigadzirwa ichi chakanyanya kukwirisa jekiseni Kuumbwa.Blow Kuumbwa kunogona zvakare kugadzira zvigadzirwa zvine diki kwazvo rusvingo ukobvu, iyo isingakwanise kugadzirwa nejekiseni kuumbwa.
Furidzira Kuumbwa kunogona kuburitsa zvisina kujairika uye zvakakosha zvigadzirwa zvine maitiro akaomarara
Kusiyana jekiseni Kuumbwa, kubereka zvidimbu zviviri kana kupfuura zvigadzirwa, kuburikidza bhakoro zvakakodzera, solvent mharadzano kana Ultrasonic nomoto together.For Somuenzaniso, yedu epurasitiki Kumbofungatira tafura pamwe kunzwisisa zvitarisiko anobudiswa nokurova Kuumbwa michina.